यसकारण भूटान बन्यो संसारकै सबैभन्दा खुसी र विकसित देश – Nepal Trending
On २४ असार २०७६, मंगलवार २०:३६
काठमाडौ । संघिय राजधानी काठमाडौं धुलो धुवाँ र प्रदूषणले आक्रान्त छ । हामीले नै गरिब ठान्ने देश भुटान भने संसारकै प्रदूषण मुक्त र संसारकै सबैभन्दा खुसी देश हो । यो उपलब्धीमा जति योगदान सरकारी नीतिको छ उत्तिकै योगदान यहाँका नागरिकको पनि छ ।
यो देशको सुन्दरता देखेर संसारभरबाट पर्यटक यहाँ पुग्छन् । भुटानका चर्चित चिन्तक तथा ग्रोस नेशनल ह्याप्पिनेस सेन्टर भुटानका प्रमुख डा. सांगडू क्षेत्रीका अनुसार भुटानका नागरिक प्रकृतिलाई भगवान मान्छन् । यहाँ आज पनि परिवारका कैयौं पुस्ता एउटै घरमा प्रकृतिको चिन्ताका साथ रहन्छन् । भुटानको कूल गार्हस्थ उत्पादन नेपालको भन्दा निकै कम छ । तर, यहाँका नागरिक प्रसन्न, सन्तुष्ट छन् र प्रकृतिसँग प्रेम गर्दै, जीवनको मूल्य बुझ्दै अगाडि बढिरकेका छन् ।
५ कारणले गर्दा भुटान संसारकै खुसी देश बन्न सकेको हो ।
जंगलको संरक्षण – भुटानको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यहाँको जंगल हो । भुटानलाई संसारको सबैभन्दा हराभरा देश मानिन्छ । भुटानको कूल भूभागको ७० प्रतिशत भूभागमा जंगल छ । प्रकृतिले घेरिएको भुटानलाई संसारमा सबैभन्दा धेरैअक्सिजन उत्पादन गर्ने देश मानिन्छ । उच्च पर्वत, नदीको सफा पानी र हरियाली यहाँको विशेषता हो । यहाँ जति कार्बन उत्पादन हुन्छ त्यो सबै यहाँका जंगलले नै नष्ट गरिदिन्छन्। यही खुबीका कारण भुटान प्रदूषण रहित छ । जंगल जोगाउन यहाँको सरकार मात्र होइन नागरिक पनि उत्तिकै योगदान दिन्छन् ।
२० वर्षदेखि प्लाष्टिकमाथि प्रतिबन्ध – प्लाष्टिक कतिसम्म खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा भुटानले धेरै पहिले बुझिसकेको थियो । सन् १९९९ मा नै यहाँ प्लाष्टिकका कैयौं सामानमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । २० वर्ष पछि अहिले पनि हाम्रो देशमा भने प्लाष्टिक छ्याप्छ्याप्ती छ जसका कारण हाम्रो देशमा प्रदूषण फैलिएको छ । उता भुटानमा भने प्लाष्टिक प्रतिबन्धको नियमलाई यहाँका हरेक नागरिक अभियानजस्तै मान्छन् र कडाइका साथ त्यसको पालना गर्छन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थविरोधी कानुन बनाउने पहिलो देश – भुटानका अधिकांश नीति यस्ता छन् जसले पर्यावरण र नागरिकको स्वास्थ्य राम्रो राख्न सहयोग पुर्याउँछन् । धुम्रपान र सूर्तिजन्य पदार्थसँग भुटानको लडाइँ निकै पुरानो हो । झण्डै ३ सय वर्ष पहिले सन् १७२९ मा सूर्तिजन्य पदार्थ रोक्न कानुन बनाउने पहिलो देश भुटान थियो । १९९० मा यहाँ धुम्रपान र सूर्तिजन्य पदार्थविरोधी अभियान अझै कडा भयो । फलस्वरुप भुटानका २० जिल्ला धुम्रपानमुक्त जिल्ला घोषित भइसकेका छन् । २००४ मा पूरै देशमा धुम्रपानमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । कानुनअनुसार धुम्रपान र सूर्ति सेवन गर्दा पक्राउ परेमा सिधै जेल जानुपर्छ र जमानत हुँदैन ।
हरियाली बढाउने रेकर्ड बनायो – भुटानको हरियाली र स्वच्छताको चर्चा विश्वभर छ । देशलाई अझै हराभरा बनाउनको लागि २०१५ मा ‘सोसल फरेष्ट्री डे’को अवसरमा भुटानमा १०० जवानको टिमले मिलेर १ घण्टामा ४९ हजार ६७२ बिरुवा रोपे । एकैपटक सर्वाधिक बिरुवा रोपेको भुटानको यो विश्वरेकर्ड गिनिज बुकमा दर्ता भयो । यस पटक अघिल्लो रेकर्ड तोड्दै पहिलेभन्दा १० हजार बढी बिरुवा रोपियो । २०१५ मा हजारौं नागरिकले भुटानका राजा रानीको पहिलो सन्तान राजकुमार ग्यालसेको जन्मदिन १ लाख ८ हजार बिरुवा रोपेर मनाएका थिए ।
पर्यावरण दिवसमा पैदल दिवस मनाउने पहल – गत वर्ष भुटानमा विश्व पर्यावरण दिवसलाई पैदल दिवसको रुपमा मनाउने पहल गरिएको थियो । भुटानको यातायात विभाग ‘रोयल भुटान पुलिस’को निर्देशनअनुसार देशभर शहरी क्षेत्रमा यातायात बन्द थियो । सडकमा आपतकालीन वाहनलाई मात्र चल्न दिइएको थियो । यो निर्देशनलाई यहाँका नागरिकले कडाइका साथ पालना पनि गरे ।
देशमा कुनै पनि वृद्धाश्रम छैन – रोचक कुरा त के भने भुटानमा एउटा पनि वृद्धाश्रम छैन र यहाँका नागरिकले आफ्नो समाजमा यस्तो ठाउँ हुनु हुँदैन भन्ने मान्छन् । भुटानका चिन्तक डा. सांगडू क्षेत्री भन्छन् – यो समाजको लागि कलंक हो । नकारात्मक विचारसँग जोडिएर रहँदा प्रसन्नता नआउने उनको तर्क छ । परिवार एकसाथ रहँदा प्रसन्नता आउने भन्दै यहाँ कसैले पनि वृद्धवृद्धालाई वृद्धाश्रम पठाउने कुरा मान्दैनन्।
भारतमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको अपमान, विमानस्थलमा गभर्नरद्वारा स्वागत, मोदीले गरे बीच…